အသံလွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း - - အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ Network18 သွက်လက်, အနာဂတ်-အဆင်သင့်စစ်ဆင်ရေးမူတည်ပြီးမှမြက်ချိုင့်ဖွင့် iTX ပလေးအောက်ကိုအပေါ် Standardizes NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ Network18 သွက်လက်, အနာဂတ်-အဆင်သင့်စစ်ဆင်ရေးမူတည်ပြီးမှမြက်ချိုင့်ဖွင့် iTX ပလေးအောက်ကိုအပေါ် Standardizes
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ Network18 သွက်လက်, အနာဂတ်-အဆင်သင့်စစ်ဆင်ရေးမူတည်ပြီးမှမြက်ချိုင့်ဖွင့် iTX ပလေးအောက်ကိုအပေါ် Standardizes
Montreal - 8: 00 CET စက်တင်ဘာလ 13 2019 - Network18, အိန္ဒိယ၏အကြီးဆုံးမီဒီယာအုပ်စုများ၏တဦးတည်း, တပ်ဖြန့်ထားသည် မြက်ချိုင့်s ကိုအလွန်အမင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အရွယ်မှာ '' iTX ဘက်ပေါင်းစုံပလေးအောက်ပလက်ဖောင်း အားလုံး၎င်း၏အဆောက်အဦကိုဖြတ်ပြီးတစ်ဦးစံပလေးအောက်မော်ဒယ်မှအကူးအပြောင်းများကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ရန်။ ဒီဖြေရှင်းချက်က၎င်း၏သက်သေအနာဂတ်-အထောက်အထား features တွေအဘို့ရွေးကောက်တော်မူခြင်း, မျိုးစုံပလေးအောက် channel များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်လုပ်ကိုင်ရန်မွန်ဘိုင်းအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီဖွခံခဲ့ရသည် - မျိုးစုံပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီး - သာ. ကြီးမြတ်အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ထိရောက်မှုအတူ။
Network18 ထိုကဲ့သို့သော News18 ကွန်ယက်, CNBC-TV18, CNN သို့ News18, အရောင်များ, MTV, Moneycontrol, Firstpost နှင့် Forbes မဂ္ဂဇင်းအိန္ဒိယအဖြစ်မီဒီယာအတွက်အကြီးမားဆုံးအမည်များမျိုးစုံဒီဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်အပြင်သတင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးလိုင်းများ၏ကြီးမားသောရောနှောလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ထိုအစာရှောင်ပြောင်းလဲမှုလိုအပ်ချက်များနှင့်လျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာစျေးကွက်ဖြည့်ဆည်းဖို့, အဖှဲ့အစညျး SDI baseband အဖြစ်ပြုလုပ်ရန်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲခြင်း, SD ကထဲကနေ 25K UHD ရန်, ပြုလုပ်ရန်အကြီးစားပေါင်းစည်းပလေးအောက်ကိုကိုင်တွယ်နှင့်4ပုံစံများနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်နိုင်စွမ်းအနေနဲ့ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ဖြေရှင်းချက်လိုအပ်အဖြစ် အပိုဆောင်း transcoding မပါဘဲအိုင်ပီ။ မြက်ချိုင့်ဖွင့် iTX ဖြေရှင်းချက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်စဉ်ကိုအလိုအလျောက်နှင့်အောက်ပိုင်း OPEX များအတွက်အဆုံးမှအဆုံးသို့လုပ်ငန်းအသွားအလာ tools များနှင့်အတူအနာဂတ်စေတနာများအတွက်အိုင်ပီ / SDI ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုပို့, ထုတ်လွှင့်ရုပ်မြင်သံကြားများအတွက်အလွန်အမင်းအဆင့်မြင့်, ဘက်ပေါင်းစုံပလေးအောက်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။
Rajat Nigam က, Group မှကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်နည်းပညာအရာရှိ Network18 commented: "Network18 မှာကျနော်တို့အဆက်မပြတ်တန်ဖိုးကိုခေါင်းဆောင်မှုကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ aligned အသစ်များနည်းပညာများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုလေ့လာစူးစမ်းခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စုတစ်စုဖြတ်ပြီးနည်းပညာများစံဆီသို့ဦးတည်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အစာရှောင်ထွန်းသစ်စဒီဂျစ်တယ်ကမ္ဘာတွင်အတွက်မဆိုစက်ပေါ်မှာ, ဘယ်နေရာမှာမဆို, သတင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးမှ real-time access ကိုများအတွက်ဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောဖြေရှင်းနည်းများနှင့် Workflows အကောင်အထည်ဖော်ရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ system ကို design ကိုအမြဲအလွယ်တကူပိုမို channel များကို add အွန်လိုင်းနှင့်လူမှုရေးပလက်ဖောင်းမှန်ဆောင်မှုမကယ်မလွှတ်သို့မဟုတ်ဒီနေ့ရဲ့ Multi-Platform ကိုဖြန့်ဖြူးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတ 4K UHDTV အကြောင်းအရာကိုထောကျပံ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖွကြောင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းနှင့်ဘက်စုံ၏အခြေခံမူများကိုလိုက်နာခဲ့သည်။ တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကယ်နှုတ်တော်မူရန်ကိရိယာများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုနိုငျသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်နှင့်အလုပ်လုပ်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါတယ်အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနှင့်အနာဂတ်-proofing ငါတို့အဘို့အညာဘက်ကြောင်းကိုစနစ်ရတဲ့ဖို့အရေးကြီးသည်။ techno-စီးပွားဖြစ် In-depth ကိုအကဲဖြတ်အပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့မြက်ချိုင့်ထဲကနေ iTX system အတွက်ရွေးချယ်မှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ "
မြက်ချိုင့်ဖွင့် iTX ပလက်ဖောင်းထိုကဲ့သို့သောဖိုင်ကိုနှင့်လိုင်းများသုံးစွဲ, ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် preview ကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအဖြစ်အဆုံးမှအဆုံးသို့လုပ်ငန်းအသွားအလာကိရိယာများ, ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းတစ်ခုအလိုလိုသိဘက်စုံသုံးအော်ပရေတာ interface ကိုကယ်တင်တတ်၏။ အဆိုပါကွန်ယက် 18 အဖွဲ့သည်တဦးတည်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပလက်ဖောင်းအတွက်စာတန်းထိုး, SCTE နှင့်ကျော် voice (VO) မှ High-end ဂရပ်ဖစ်ကနေလိုအပ်ရှိသမျှကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုရရှိမညျဖွစျသညျ။ Network18 လည်းတပ်ဖြန့် GV ION ပလေးအောက်ကနေသတင်းထုတ်လုပ်မှု applications များအနှံ့ယုံကြည်စိတ်ချရသေချာကြောင်းသိုလှောင်မှု။
Farzin Najmi, ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, ထုတ်လွှင့်နည်းပညာနှင့်စစ်ဆင်ရေး, CNBC-TV18 ကဆက်ပြောသည်: "တစ်လျှင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်နေသောစျေးကွက်မှာတော့, ကြံ့ခိုင်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ရန်လွယ်ကူအလိုလိုသိနှင့်အနာဂတ်-အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်း tools တွေရှေ့ကွေး၏တည်းခိုဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ , ပေါင်းစည်းမှုအဆင့်စဉ်အတွင်းနဲ့ post ထောက်ခံမှုဝနှစ်ဦးစလုံး, လက်ျာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုကိုမည်သို့ရှိသည်သောမိတ်ဖက်နှင့်အလုပ်လုပ်လည်းအရေးပါ, ငါတို့သည် Network18 နှင့်မြက်ချိုင့်တစ်ခုရေရှည်လက်တွဲဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
Network18 ပြီးသား 36 ၏အဆုံးအားဖြင့်ပြီးစီးဘို့စီစဉ်ထားအပြည့်အဝရွှေ့ပြောင်းအတူ iTX နှင့်အတူထက်ပို 2020 လိုင်းများနှင့်အတူတိုက်ရိုက်သွားပြီ။ ဒါကအားလုံးနေရာများတွင်ဒယ်အိုး-အိန္ဒိယကဲ့သို့သောစက်ရုံစုစည်းပြီး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် iTX သုံးပြီးစံနည်းပညာဖြေရှင်းချက်ရှိခြင်းဗဟိုတည်နေရာယူဆောင်ပါလိမ့်မည်။
"လူငယ်ကဏ္ဍ ပို. ပို. ရိုးရာ linear န်ဆောင်မှုများအပြင်ဒစ်ဂျစ်တယ် OTT ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်ဖြေရှင်းရန်ရှိသည်," Somu Patil, ရောင်းအား၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပွေး, မြက်ချိုင့်ကပြောသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ iTX ဖြေရှင်းချက်ဖိုင် / တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအိုင်ပီ / SDI ပလေးအောက်, စာတန်းထိုး / စာတန်းထိုး, အသံအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဂရပ်ဖစ်အမှတ်တံဆိပ်လွှမ်းခြုံ, အကြီးစားဘက်ပေါင်းစုံပလေးအောက်များအတွက်လိုမျိုးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစနစ်ကိုလည်းသီးခြား encoding ကဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲမျိုးစုံပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီးန်ဆောင်မှုကိုကယ်နှုတ် Network18 နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ Network18 နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ပူးပေါင်းတိုးချဲ့ခဲ့ကြရန်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ယနေ့င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်အနာဂတျမှာကိုကူညီဂုဏ်ယူပါ။ "
မြက်ချိုင့်ဖြေရှင်းနည်းများ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဆန္ဒပြပွဲများအဘို့, IBC9မှာတဲ 01.A2019 သွားရောက်ကြည့်ရှု။
Q India သည် MX Player ကိုစတင်ခဲ့သည် - နိုဝင်ဘာလ 21, 2019
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ FOR-A, မူကွဲစနစ်များ, ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု OTT SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-09-13
ယခင်: ACCESS နှင့်နောက်မျိုးဆက်တီဗီနှင့်ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုများကိုရိုးရှင်းဖို့ EKT မိတ်ဖက်
နောက်တစ်ခု: Verizon ကမီဒီယာအပြည့်အဝကို Microsoft Azure ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အတူမိတ်ဖက်များအတွက် streaming ရိုးရှင်းစွာ